करिश्मा र राजेश हमालले शुभमुहूर्त गरेर पनि ‘भाग्यरेखा’ किन छाडेका रहेछन् ? – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/करिश्मा र राजेश हमालले शुभमुहूर्त गरेर पनि ‘भाग्यरेखा’ किन छाडेका रहेछन् ?
काठमाडौं । नायिका करिश्मा मानन्धरले शुुभमुहूर्त गरेर पनि अन्तिम समयमा आफूले ‘भाग्यरेखा’ चलचित्र छाडेको खुलासा गरेकी छन् । ‘भाग्यरेखा’ राजेश हमालको डेब्यु चलचित्र बन्दै थियो । चलचित्रका निर्देशक दीपक रायमाझी थिए । उनी राजेशका मामा हुन् ।
आफ्नो भान्जाको डेब्यु गराउँदा उनले करिश्मा मानन्धरलाई नायिका छानेका थिए । र, चलचित्रको शुभमुर्हूत पनि गरियो । तर, केही समय सुटिङ गरेर पनि बीचमै चलचित्रबाट राजेश र करिश्मा अलग भए । ‘भाग्यरेखा’ छाड्नुको कारण करिश्माले अहिलेसम्म खोलेकी थिइनन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा राजेश र आफ्नो ‘भाग्यरेखा’ को शुभमुहूर्तको तस्बिर फेला परेपछि उनी आश्चर्यचकित हुँदै टिप्पणी गरेकी छन् ।
करिश्माले सो तस्बिर ‘भाग्यरेखा’को मुहूर्तको समयको भएको, तर आफूले केही ‘खास कारण’ चलचित्र छाडेको लेखेकी छन् । उनले त्यो ‘खास कारण’ भने उल्लेख गरेकी छैनन् । राजेश र करिश्मा अलग भएपछि रवीन्द्र खड्का र मौसमी मल्ललाई लिएर चलचित्र बनाइएको थियो ।